MICE Onye nhazi, njem ụlọ ọrụ na Dubai & Abu Dhabi
MICE - Nzukọ ndị isi na onye nhazi ogbako na Dubai & Abu Dhabi
Mkpali & Mgbakọ site Royal Arabian, ụlọ ọrụ na-eduga na-ebuga ọtụtụ ihe atụ MICE ngwọta na UAE, karịsịa Abu Dhabi na Dubai.
UAE bụ ebe kacha mma maka njem mkpali na mmemme ụlọ otu. Ndị ọkachamara anyị na-enyere aka n'inye ohere bara uru maka ịbawanye mmetụta nke ịbụ ụlọ ọrụ, na-eduzi otu dị iche iche ijikọ, na ịkpali idozi nsogbu na nka onye ndu.
agbamakwụkwọ na-ebuwanye ibu ma na-azụlite na usoro ọhụrụ na otú ahụ ka anyị dị. Azụmahịa agbamakwụkwọ bụ azụmahịa siri ike nke ukwuu, ebe nhazi na-eme n'akụkụ ọ bụla. Anyị na-aghọ otu ebe a na-akpọtụrụ - site na ile ọbịa na mmekọrịta ndị ọbịa na ngwa ngwa. Na-achịkọta ihe ndị kacha nta ọnụ n'ụzọ zuru oke ọnụ.
Anyị na-enye ebe nkwụsị ọrụ maka otu nkwụsị mkpa inbound njem ụlọ akwụkwọ na kọleji. Anyị na-aga maịl ọzọ iji lekọta ya otu na ndị mmekọ ụlọ ọrụ ndị na -aga mgbe niile ma na -elekwa anya nke ọma n'ịgbasa echiche nke onye ọrụ ma ọ bụ nwa akwụkwọ ọ bụla.
Anyị na-elekọta ndị njem nleta niile - ndị na-anụ ọkụ n'obi egwuregwu, ndị na-ahụ maka njem nlegharị anya; ndị njem nlegharị anya na-achọ njem nlegharị anya gburugburu ebe obibi, njem ihe nketa, agbamakwụkwọ mba ofesi, na ntụrụndụ. Ndị na-ahụ n'anya okike, ndị na-achọ ịgagharị omenala omenala, ndị na-eme ihe nkiri. Anyị na-ahazi nhazi njem kacha mma maka onye ọ bụla dịka mkpa ha si dị.
Site na echiche site na nnyefe okike nke ihe omume ahụ, ndị otu anyị na-enye nhọrọ kachasị mma maka nnọkọ gị. Anyị na ụlọ ọrụ ahụ na-arụkọ ọrụ iji wepụta ihe omume na-agaghị echefu echefu maka ndị nnọchiteanya yana ROI a na-ahụ anya ozugbo.
Ndị otu anyị nọ n'ime ụlọ na-emepụta usoro okike iji gosipụta ụlọ ọrụ gị na ihe ngosi mba ụwa. Anyị na-akọwapụta ohere dị n'ime oghere ngosi ahụ enyere ma hụ na ịdị mma nwere nhọrọ ndị dị ọnụ ala.
Atụmatụ mmemme ụlọọrụ
Ndị otu anyị maka mmemme ụlọọrụ nọnyeere gị n'ụzọ niile site na nhazi, na-ekwurịta okwu kacha mma na ndị na-enye ọrụ, na ime ihe omume ahụ na ọkwa kachasị elu nke nnyefe ọrụ.
Site na ọkwa mbụ ruo igbu, ndị ọkachamara anyị na-ahazi ihe omume ụlọ ọrụ na ọkwa kachasị elu nke ọkachamara. Anyị na-enyere gị aka inweta azụmahịa kacha mma n'aka ndị na-enye ọrụ dị elu ma nweta ọkwa kachasị elu nke nnyefe ọrụ.
Mkpali & Mgbakọ site Royal Arabian, na-enye njikwa saịtị na-enyere gị aka imezu nkọwa niile nke ihe omume gị. Site na ndebanye aha gaa na nnabata, anyị na -agba mbọ hụ na ihe omume gị emechara nke ọma.
Aka imepụta ihe
Site n'ịtụgharị uche na mmejuputa ozi ụlọọrụ gị n'ime usoro kacha atọ ụtọ otu ndị ọkachamara anyị na-agba mbọ ịkwalite mmemme gị site na iji isiokwu okike.
Anyị na-enye ọtụtụ ihe egwuregwu na ihe ịma aka na-arụkọ ọrụ ụlọ nke na-ekwe nkwa ịnabata ndị nnọchiteanya gị. Anyị na-enyekwa mmemme mkpali dabere na isiokwu, na-enye akụkụ nke ọkaibe na mmemme ụlọ ọrụ gị na Dubai, Abu Dhabi, na ndị ọzọ UAE.
Ndị otu anyị na-enyocha, chepụta ma na-ebuga mmemme mkpali dị elu nye ụfọdụ ụdị mba ụwa kachasị elu, na-ejikọta mmetụ nke Arabia mpaghara na mmasị ndị ọbịa gị.
Food na onunu
Ihe mkpali na ọgbakọ anyị na-egbo mkpa nke ndị nnọchi anya gị niile, na-ahazi nri nri ụwa sitere na ezigbo nri Arabic gaa na Far East Asia na efere European ọgbara ọhụrụ. Nwee ahụmahụ iri nri dị ka ọ dịtụbeghị mbụ.
Gburugburu ebe njedebe
Anyị na-enyere aka tinye ozi ụlọ ọrụ gị kwa afọ n'ime mmemme abalị 4 ma ọ bụ mepụta isiokwu njedebe maka mmemme mkpali gị maka afọ ahụ. Anyị na -aga ogologo njem ahụ iji hụ na izu oke na mmemme ụlọ ọrụ gị niile.
Mkpali & Mgbakọ site Royal Arabian a na-asọpụrụ nke ukwuu ijere ọtụtụ ihe bara uru MICE ndị ahịa site n'inye ọrụ ala dị mma. N'ime afọ ndị a, anyị etolitela ndị ahịa nwere ọtụtụ ndị ahịa sitere na ngalaba ụlọ ọrụ dị iche iche sitere na telecom, ọgwụ, eletrọnịkị, ego, IT, ma ọ bụ FMCG.
Anyị na-enweta nkwado siri ike nke ndị mmekọ anyị na ụlọ mkpali, ụlọ ọrụ PR & ahịa, na ụlọ ọrụ na-ahụ maka ihe omume sitere na isi ahịa anyị bụ ndị ji ụkpụrụ ụkpụrụ ọrụ siri ike na ọrụ dị elu kpọrọ ihe.
Ụfọdụ ndị ahịa anyị nwere ihe ùgwù iso ha rụọ ọrụ bụ;